Ciidanka Booliska oo howlo miino baaris ah ka sameeyay degaank... | Universal Somali TV
Ciidanka Booliska oo howlo miino baaris ah ka sameeyay degaanka Ceelasha Biyaha
Ciidanka booliska dowlada gaar ahaan qeybta loo yaqaan Haramcad ayaa ku guuleestay in miinooyin ay ka soo saaraan inta u dhaxeysa deegaanka siinka Dheer iyo degmada ceelasha Biyaha oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose.
Miinooyinka oo ahaa kuwa meelaha fog laga hago ayaa la aaminsan yahay in wadada ay ku aaseen ururka Al-Shabaab ee dagaalka kula jira ciidanka dowlada iyo kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom.
Saraakiisha howlgalkaan fulisay oo la hadlay wakaalada wararka dowlada ayaa sheegay in dadka deegaanka ay ku soo wargaliyeen in Miinooyin lagu aasay wadada xiriirisa ceelasha biyaha iyo deegaanka Siinka Dheer.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa miinooyin u dhiga gaadiidka dowlada iyo kuwa Amisom ee isticmaala inta u dhaxeysa magaalada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Kan-xigaBooliska Mareykanka oo baadi goob ugu...
Kan-horeKuuriyada waqooyi oo ku dhawaaqday in...
53,372,719 unique visits